Warshadda Dheriga Shaaha - Shiinaha Soosaarayaasha dheriga Shaaha, Alaab-qeybiyeyaal
200ml ~ 750ml camellia qasacad
[MULTI-UJEEDO & AWOODDA]: dhalooyinka wax lagu karsado ee awoodda leh waa cabirka ugu habboon ee lagu keydin karo dhir udgoon, geedo yaryar, saxmad, kayd, shaah iyo waxyaabo kale oo badan. Cabbir kasta wuxuu ku habboon yahay isticmaalka guriga maalin kasta.
[CAAFIMAAD & BADBAADO]: Dhaladahayaga udgoon ee muraayadda aan sunta lahayn iyo weelasha aan lahayn BPA gabi ahaanba waa kuwo caafimaad qaba oo badbaado u leh qoyskaaga. Waxay bixisaa iska caabin ka sarreeya jabitaanka. Qeyb kasta waxay u timaaddaa si ammaan ah oo loogu rakibo sanduuq leh kala-qaybiyeyaal si looga hortago jajabka inta ay rarka socoto
[FARSAMADA & NADIIFKA]: Daboolka foorarka dusha sare ka furan ayaa fududahay in la furo lana xiro, afka ballaaran ayaa sahlaya buuxinta iyo bixinta. Weel kasta oo dhalo ah ayaa si fiican loo xidhay, oo ay ku qalabaysan yihiin silsilad silikoon ah iyo iskuxidh bir bir ah oo xiraya si loo hubiyo in cuntadaadu ahaato mid nadiif ah, cusub oo aamin ah inta lagu jiro keydinta.
Y [MUUQAALKA FASHILKA & FUDUD EE LAGU QAADO]: Weelku wuxuu leeyahay naqshad casri ah oo loogu talagalay guri kasta iyo ganacsi kasta. U adeegso weelka si aad ugu adeegto kafee, shaah, is biirsaday ama abuur farshaxan.
RE [REUSABLE]: Dhalooyinka way fududahay in la dhaqo oo dib ayaa loo isticmaali karaa marar badan .Glas ma kala baxo, ma hayo urta, ama kuma siibo kiimikada cuntada.
500 ~ 1000ml weel dhalada ah oo xajis ah